50ml Dia 30mm ဘဲဥပုံပလတ်စတစ် PE အလှကုန်ပစ္စည်း Tube BB ခရင်မ်အလှကုန်ပစ္စည်းစက်ရုံ၊ အလှကုန်ပစ္စည်း Tube ပေးသူ Jiangsu Xinfly Packaging Co. , LTD
Empty 40ml အလှကုန်ပစ္စည်း BB cream Foundation Foundation Container Ov ...
Empty 50ml OVAL အလှကုန်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော BB CC လက်ဖြင့်ဖန်တီး ...
XINFLY PACKAGING အလွတ် ၅၀ml အလှကုန်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော BB ...
100ml Faci အတွက်ပလတ်စတစ်အလှကုန်ပစ္စည်း Tube ထုပ်ပိုးခြင်း ...
40ml ပျော့သောဘဲဥပုံပြားပလပ်စတစ်အလှကုန်ထုပ်ပိုးပြွန် ...
50ml အချည်းနှီးသောအလှကုန် BB cream Foundation Foundation Container Ov ...
100ml ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောသတ္တုဘောလုံးအနှိပ်မုန့် ...
BB Cream အတွက် 50ml Dia 30mm ဘဲဥပုံပလပ်စတစ် PE အလှကုန်ပြွန်
BB Cream အတွက် 50ml Dia 30mm ဘဲဥပုံပလပ်စတစ် PE အလှကုန်ပြွန် - တရုတ်အလှကုန်ပြွန်ပေးသွင်းသူများ | အနိမ့် MOQ စိတ်ကြိုက်
| Jiangsu Xinfly Packaging Co. , Ltd ။ အလှကုန်ပြွန်ထုပ်ပိုးမှုများကိုဒီဇိုင်းဆွဲ၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းများပြုလုပ်သောကျွမ်းကျင်သည့်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
အရှည်: ပြွန်စွမ်းရည်၏အကွာအဝေးအတွင်းချိန်ညှိ (3ml မှ 500ml)
အလွှာ: mono-layer, double-layer နှင့် 5layers tube
ပုံစံ: ပတ်ပတ်လည်, ဘဲဥပုံ, စူပါပြားချပ်ချပ်
ပစ္စည်း: LDPE, HDPE, MDPE, LLDPE, SOFT TOUCH, EVOH
Tube အရောင်: အဖြူ, ပွင့်လင်း, အရောင်
ပုံနှိပ်ခြင်း - ၁-၆ အရောင်များကိုအော့ဖ်စက်၊ silkscreen ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပူပြင်းခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း
ထုပ်ပိုးခြင်း - ပလပ်စတစ်အိတ်နှင့်အတူကဒ်ဘုတ်အကွက်နှင့် coton
ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း: T / T, West Union, L / C
ဆိပ်ကမ်း - ရှန်ဟိုင်း
အရှည် ပြွန်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာ (၃ မှ ၅၀၀ မီလီမီတာ) အတွင်းပြုပြင်သည်
အလွှာ mono-layer, double-layer နဲ့ 5layers tube
ပုံစံ ပတ်ပတ်လည်ဘဲဥပုံ, စူပါပြား
ပစ္စည်း LDPE, HDPE, MDPE, LLDPE, SOFT ထိသမျှ၊
Tube အရောင် အဖြူ, ပွင့်လင်း, အရောင်
ကုတ်အင်္ကျီ တောက်ပ, Matte
ပုံနှိပ်ခြင်း 1-6 အရောင်များကိုထေမိ, silkscreen ပုံနှိပ်ခြင်း, ပူပုံနှိပ်ခြင်း, တံဆိပ်ကပ်
ဦး ထုပ် အပေါ်ဆုံးအဖုံးလှန်ပါ၊
ထုပ်ပိုး ပလပ်စတစ်အိတ်နှင့်အတူကဒ်ဘုတ်အဖွဲ့ဗန်းနှင့် coton
ငွေပေးချေစနစ် T / T, အနောက်ပြည်ထောင်စု
Previous: အမျိုးသားမျက်နှာသန့်ရှင်းရေးအတွက် 100ml အလှကုန်ပလပ်စတစ်ပြွန်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
နောက်တစ်ခု - Eye Cream အတွက်ရှည်လျားသော nozzle နှင့်အတူအလှကုန်ပစ္စည်းပလပ်စတစ်အလှကုန်
မှာထားသည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အရေအတွက်အရရက်ပေါင်း ၂၀ မှ ၂၅ ရက်အကြားကွာခြားနိုင်သည်။
အပိုင်း ၁၀၀၀၀ ။ သင်ပိုမိုမှာယူလေလေစျေးနှုန်းချိုသာလေလေဖြစ်သည်။
၂၄ နာရီအတွင်းအပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုနှင့် ၁။ အမြန်တုံ့ပြန်မှုများ။
ဖောက်သည်များ၏အကောင့်အပေါ် 2. နမူနာအခမဲ့, Courier စွဲချက်။
4. နမူနာများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်အတန်းချက်ချင်း update လုပ်။
1. အညစ်အကြေးပြွန်: ပြွန်ရဲ့အရွယ်အစားအရသိရသည်။
2. ကတ္တားအရွယ်: ပြွန်ရဲ့အရွယ်အစားအရသိရသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုနမူနာပူဇော်ဖို့ဂုဏ်ယူကြသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအသစ်များအတွက် Courier ကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးချေရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အညီနမူနာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Q6: အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏စက်ရုံသည်မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်အရည်အသွေးမြင့်စစ်ဆေးရေး ၀ န်ထမ်းများကိုအထူးပြုထားပြီးသူတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းတိုင်း၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
2) ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ပစ္စည်းသည်လုံးဝသန့်ရှင်းပြီးပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအသစ်စက်စက်ဖြစ်သည်။
3) ပြွန်ကိုယ်ထည်နှင့်အဖုံးများအတွက် Panton အရောင်များကိုလက်ခံနိုင်သည်။
၇။ ရက်နှင့် ၇ ရက်ခန့်ကြာမြင့်မည့်ပုံနှင့်အရောင်စစ်ဆေးခြင်းကိုကြိုဆိုပါသည်။
၅) စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးခြင်းနည်းလမ်းသည်ကြိုဆိုပါ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်ပြွန်နှင့်ထုပ်များကိုသီးခြားစီထုပ်သည်။
၆။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြွန်အမြီးကိုကြိုတင်တံဆိပ်ခတ်နိုင်သည်။ ဦး တင်သည်ပြွန်၏ ဦး ခေါင်းကိုတံဆိပ်ခတ်နိုင်သည်၊ ပြွန်ကိုသင်၏လိုအပ်ချက်အဖြစ်ဖြည့်နိုင်သည်။
သင်၏ထုပ်ပိုးမှုလိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးရန်၊ ကိုးကားရန်တောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်နမူနာများကိုလက်ခံရရှိရန်မေးမြန်းလိုပါကအောက်ပါနည်းလမ်းများ သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Jiangsu Xinfly Packaging Co. , LTD သည်အလှကုန်ပြွန်များအားဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလှကုန်ပြွန်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းပြီးပြည့်စုံသောပြွန်သည် extruded PE tube (နှစ်ပြွန်၊ ပြွန်ငါး)၊ Laminated Tube (ABL, PBL နှင့် High Gloss) ) ။ Xinfly စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအပြင်တည်ငြိမ်။ အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုသောအဖွဲ့သည်စျေးကွက်ကိုထူးခြားဆန်းပြားသောထုပ်ပိုးမှုအသစ်များနှင့်အတူထောက်ပံ့ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ ကုမ္ပဏီတွင်လူသိများသောပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိပြီး micro-brand ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်။
ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်“ အရည်အသွေးသည်ပထမ ဦး စားပေးဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကိုဖြစ်စေသည်” နှင့်အညီကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်အရည်အသွေးကောင်း၊ အမြန်ပေးပို့ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများကိုအမြဲတစေအမြဲတစေတောင်းဆိုနေခဲ့သည်။ ဤထင်မြင်ချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ XINFLY ကိုအရည်အသွေး၏အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းအသစ်များထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်နည်းပညာဌာနနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဌာနကိုတည်ထောင်ထားပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအားလုံး ၁၀၀% ကိုတင်ပို့ခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် QC ၀ န်ထမ်းများကအကုန်လုံးစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်သည်။
50ml အလှကုန် tube
စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးခြင်း 10ml က c အလှကုန်ထုပ်ပိုးပုံနှိပ်ခြင်း။
လက်ကားညှစ်ညှစ်ပြွန်လက် Gloss ကွန်တိန်နာနှုတ်ခမ်း ...
ဗလာ ၅၀ မီလီမီတာ OVAL အလှကုန်အခြေခံအုတ်မြစ် BB CC လက်ကိုင် ...